गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रश्नः टाउकोमा ढुंगाले थिचेर मार्ने कस्तो राजनीतिक घटना हो ? – YesKathmandu.com
प्रहरी प्रधान कार्यालयले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषिको सुचि गृहलाई पठायो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषिहरु किटान गरी गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले टीकापुर नरसंहारको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिंसा भड्काएर नरसंहार गर्ने मुख्य दोषिहरुको सुचि गृहमन्त्रालयमा पठाएको हो ।
टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६, सशस्त्र प्रहरीका २ र एक नावालकको निधन भएको थियो । घटना भएलगतै नेपाल प्रहरीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश अमात्यको सयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । प्रहरीको छानविन समितिले धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, रामचन्द्र चौधरी लगाएत मुख्य दोषि रहेको ठहर गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनमा दोषि ठहर गरिएकाहरुको सुचि गृहमन्त्रायलमा पठाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको ३१ पृष्ठ लामो छानविन प्रतिवेदन १० महिनाअघि सुरक्षा परिषदमा बुझाई सकेको थियो । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यही विभत्सपूर्ण घटनाको सम्झना गराउँदै मुख्य अभियुक्तहरुको सुचि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण चौधरीले सम्झाउँदा पनि उनीहरुले नमानेको, भागेर घरभित्र लुकेका न्यौपानेलाई घरेलु हतियार प्रयोग गरेको र बाहिर निकालेर टाउको ढुंगाले थिचेर मारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरीको प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनामा ५८ जना मुख्य दोषि रहेको र त्यसमध्ये रेशम चौधरी लगाएत ३६ जना फरार रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले आठ जनाको विभत्स हत्या मात्र नभई उनीहरुलाई एउटा एसएलआर, मल्टी ग्याँस गण, पेस्तोल, १४ राउण्ड गोली, सञ्चार सेट लुटेको आरोप सहित कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गृहमन्त्री निधिले पछिल्लो समय टीकापुर घटनाका मुख्य दोषिको मुद्दा फिर्ता नलिने र अन्यको फिर्ता लिने बताएपछि प्रहरीले ५८ जना मुख्य अभियुक्तको नाम गृहमन्त्रालयमा पठाएको हो । प्रहरीले कडा अडान लिएपछि गृहमन्त्री निधि समस्यामा परेका छन् । उनले टीकापुर घटनको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने जानकारी मधेसी मोर्चालाई गराएका छन् ।
One thought on “गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रश्नः टाउकोमा ढुंगाले थिचेर मार्ने कस्तो राजनीतिक घटना हो ?”
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका कारण सुरक्षा निकायमा सिथिलता अाए त्यसकाे जिम्मेवार निधि हुनेछन्।
विदेशबाट फर्किंदा श्रीमती गर्भवती पाएपछि….
छुवाछुतको चरम यातना भोगेको मलिक परिवारले पानी पायो
उद्योगीमाथी गोली प्रहार,सशस्त्रले अपराधीलाई पक्राउ गर्न मानेन
अन्धविश्वासको पाराकाष्ठा, विरामी छोरा बचाउँन छिमेकी छोराको बली !
पत्नी पीडित श्रीमानका ६ महिनामा २६ उजुरी